स्मार्ट सिटीको विकासले बदल्ने अर्थतन्त्रको चित्र, निफ्राका सिइओ रामकृष्ण खतिवडाको लेख « Bizkhabar Online
स्मार्ट सिटीको विकासले बदल्ने अर्थतन्त्रको चित्र, निफ्राका सिइओ रामकृष्ण खतिवडाको लेख
23 April, 2022 10:18 am
नेपालमा हालसम्म स्मार्ट सिटी सम्बन्धी प्रारम्भिक अवधारणा मात्र विकास भएको अवस्था छ । हामीसँग स्मार्ट सिटीको लगानी, निर्माण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुभव छैन । हुन त नेपाल सरकारको मुलुकभर कम्तिमा १४ वटा स्मार्ट सिटीको निर्माण गर्ने घोषणाअनुसार स्मार्ट सिटीको लागि आवश्यक पुर्वाधार र संरचनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशमा आएको परिवर्तनसँगै मानिसहरु सुरक्षित, सुविधासम्पन्न र आधुनिक सहरमा बस्न रुचाउछन् । साथसाथै, जनसंख्याको वृद्धिसँगै सहर सफा, सुन्दर र दिगो राख्ने कार्य चुनौतिपुर्ण हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित र सुविधासम्पन्न बसोबासको लागि स्मार्ट सिटीको निर्माण र विकास अपरिहार्य भएको छ । त्यसैले स्मार्ट सिटीलाई छुट्टै रुपमा नभई समाज र त्यससँग जोडिएका सरोकारवालाको एकिकृत विषयका रुपमा लिनुपर्छ ।
हामीले (नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक) ले विभिन्न क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दा धेरैले इच्छाएको र काम गर्नको लागि उत्साहित बनाएको विषय स्मार्ट सिटीको विकास रहेको पायौं । सबैको चाहना अब काठमाडौं लगायत ठूला सहरहरुका आसपासमा स्मार्ट सिटीको निर्माण गरी ठूला सहरहरुमा जनसंख्याको कारणले आवतजावत, सुरक्षा, सरसफाई लगायतका विषयमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गनुपर्ने विचार प्राप्त गर्यौ । तत्पश्चात हामीले स्मार्ट सिटी सम्बन्धमा ठूला र विकसित मुलुकले के गरेका रहेछन् भनेर बुझ्न अध्ययन थाल्यौ । स्मार्ट सिटीलाई बुझाउने र बुझ्ने विषय खोज्न थाल्यौं । यसलाई प्रविधिसँग जोड्ने हो कि पूर्वाधार मात्र भए पुग्ने हो वा त्योभन्दा अन्य विषय पनि हो भनेर खोज्यौं । विशेषगरी हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा यसको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने काम गरियो ।
अध्ययन पश्चात नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटी भनेको अहिले अस्तित्वमा रहेकै सहरी पूर्वाधार संरचनालाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय आयो । नेपालमा ७५३ पालिका (गाँउ र नगर) छन् । तीमध्ये कुनै पनि गाँउ वा नगरपालिकाको कुनै क्षेत्रलाई अधिकतम सेवा सुविधा उपलब्ध हुने र दीर्घकालसम्म त्यसको प्रभावकारीता रहनेगरी विकास गर्नुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा लिन सकिन्छ । पूर्वाधारको योजना तयार गर्नेदेखि लिएर उक्त स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई पुर्वाधारसँग जोडेर उनीहरुको दैनिकीलाई सरल र सहज बनाउने, पुर्वाधारको कार्यान्वयन, नियमनसम्मका कामलाई एकिकृत गर्ने विषय नै स्मार्ट सिटी हो ।
स्मार्ट भन्ने बित्तिकै आइप्याड वा स्मार्ट फोनलाई मात्र बुझ्नु भएन । कुनै पनि सहर कति दीगो हुन्छ, त्यसमा उपलब्ध भएका सेवा सुविधालाई मापन गर्न सकिन्छ सकिदैन, जो स्मार्ट सिटीको बासिन्दा हुन्छन् उनीहरुको जीवनशैलीदेखि व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने विषय पनि पर्दछन । स्मार्ट सिटीबासीहरुको तथ्यांक अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । उनीहरुको वित्तीय साक्षरता के कस्तो छ ?, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? सामाजिक अवस्था कस्तो छ ? जस्ता विषयलाई एकिकृत गर्ने र त्यसको आधारमा उनीहरुको आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधा पु¥याउने विषय पनि यसमा जोडिन्छ । कुनै नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी बन्छ भने त्यो सिटीमा बस्नेहरुको लागि आवश्यक सेवा सुविधा पुर्याउने काम त्यही नगरपालिकाको हुन्छ । स्मार्ट सिटी विकास गरेपछि त्यो आवश्यकताको पहिचान गर्ने र त्यसअनुसारको वस्तु र सेवाको उपलब्धता वा पहुँच गराउने काम नगरपालिकाले गर्ने हो ।
त्यस्तै, स्मार्ट सिटीमा पहुँच अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । जनताले खोजेका आधारभूत सेवा र सुविधा पुर्याउने विषय यस अन्तर्गत पर्छ । उदाहरणको लागि खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, विद्युत, हरित क्षेत्रको विकास , शिक्षा, स्वास्थलगायतका सेवाको सहज र सरल उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसबाहेक यी सबै सुविधाहरुलाई प्रविधिले जोड्नुपर्छ । यसरी स्मार्ट सिटीमा सेवा सुविधा प्रदान गर्दा इन्टरनेटको माध्यमबाट कार्य गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा सेवा प्रदान गर्ने निकायले के कति सेवा कसलाई प्रदान गरेको हो र सेवा प्राप्त गर्नेले समेत उक्त सेवाको बारेमा सहज तरिकाले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् र यस्तो प्रक्रियाले पारदर्शिता समेत बढाउँछ ।
त्यस्तै, एउटा स्मार्ट सिटीको निर्माण तथा विकासको अनुभव अन्य धेरै ठाँउमा अनुकरण गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि ललितपुरमा विकास गरिएको स्मार्ट सिटीलाई भोलीको दिनमा पोखरामा पुर्याउन सकिएला । एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिका वा देशभर लैजान सकिने हुन्छ । स्मार्ट सिटीको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको यसमा प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गर्ने हो । बस्ने ठाउँलाई स्वचालित (अटोमेटेड) बनाउने, इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने र त्यसबाट स्मार्टनेस सिर्जना हुने विश्वास गरिन्छ । उदाहरणको लागि बिजुली, पानीको बिल इन्टरनेटबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसैगरी जन्मदर्ता, विवाह, मृत्युदर्तादेखि नगरपालिकाले दिने अन्य सेवा प्रविधिमा समाहित गराउन सकिन्छ । यसरी उपलब्ध हुने सेवा सुविधा दीर्घकालीन हुनुपर्छ । दीर्घकालीन र दिगो बनाउन कुन प्रारुप उपयोगी हुन्छ भनेर पहिला नै अभ्यास गर्ने वा अध्ययन र अनुभवबाट सिकेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।
अहिलेसम्म सहरी विकास र स्मार्ट सिटीको लागि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को माध्यमबाट कार्य भइरहेको पाइन्छ । तर ल्याण्ड पुलिङ को माध्यमबाट सहरी विकास र स्मार्ट सिटीको निर्माण तथा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गर्न कानूनी तथा व्यवहारीक समस्या देखिन्छ । स्मार्ट सिटीमा पूर्वाधारका क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, पानी, सरसफाई, पार्कलगायतका क्षेत्रको विकासमा निजीक्षेत्रलाई सहभागि गराउनुपर्छ । यसबाहेक व्यवसायिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र बसोबास गर्ने क्षेत्रमा व्यवसायिक गतिविधी हुनु भएन् । यसलाई मापदण्डको रुपमा विकास गर्नुपर्यो । यसले सेवा वितरणलाई पनि सजिलो बनाउँछ ।
हामीले गरेका अध्ययनबाट केही नमूनाहरु र अनुभवहरु लिने÷सिकेका छौ । जस्तो कि स्मार्ट सिटीको विकासमा समुदायको सहभागीतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यसको अर्थ जुन ठाँउमा स्मार्ट सिटी विकास गरिन्छ, त्यो ठाँउको जनताको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । त्यस ठाँउमा जुन जमिन वा प्लटहरु सिर्जना हुन्छ त्यसलाई स्थानीयले विक्री गरेर बाहिरिनेभन्दा पनि प्लटको अधिकतम, प्रभावकारी र दीर्घकालीन प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेछ । समुदायको सहभागितामा त्यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु जस्तै विद्यालय, अस्पताल, होटेलको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी स्मार्ट सिटीमा आवश्यक सबै सेवा सुविधा प्राप्त हुन सक्छ । स्मार्ट सिटीको विकास र प्रयोग संसारभर नै भइरहेको छ । त्यस्तै व्यवस्था र प्रणालीको विकास नेपालमा पनि आवश्यकता भएको देखिन्छ । स्मार्ट सिटी सूचना प्रविधिमा आधारित हुने भएकोले त्यहाँ डेटा सेन्टर तयार हुन्छ र उक्त डेटा अर्थात तथ्यांक को प्रयोग व्यापक रुपमा हुन सक्छ । यसले अन्तरसम्बन्ध र सुरक्षामा पनि वृद्धि गर्छ ।
स्मार्ट सिटी र अर्थतन्त्र
स्मार्ट सिटीले कसरी आर्थिक गतिविधी सिर्जना गर्छ र कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त स्मार्ट सिटीले वास्तविक सहरीकरणलाई सुधार र अभिवृद्धि गर्छ । सहरीकरणलाई सुधार गर्दा त्यहाँ चाहिने सामान वा वस्तुहरु आवश्यक पर्छ । त्यसको उपभोग हुन्छ र बजार सिर्जना गर्छ । वस्तुको आवश्यकता र उपभोग राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वसँग जोडिन्छ । यसले एउटा इकोसिस्टम (पारिस्थितिक प्रणाली) सिर्जना गर्छ । स्मार्ट सिटीभित्रका विद्यालय, अस्पताल, बजार, मनोरञ्जन स्थललगायतमा हुने क्रियाकलाप बढ्दै जाने भएकाले यसको आर्थिक प्रणालीमा पनि ठूलो सहयोग पुग्छ ।
अर्को विषय भनेको स्मार्ट सिटीको लागत घट्नु पनि हो । थालनीमा प्रणाली बसाउन बढी खर्च लागे पनि दीर्घकालिन रुपमा यसको संचालन खर्च कम हुन्छ । किनकि धेरै विषयहरु सामूहिक र प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसले लागतलाई घटाउँछ । उदाहरणको लागि कुनै एउटा समुदायमा हरेक घरले छुट्टाछुट्टै कम्पनीको वा एउटै कम्पनी इन्टरनेट जोड्दा र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै लागत लाग्छ । तर, त्यही सेवा समुहमा लिंदा न्यून खर्चमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यस्तै, स्मार्ट सिटीले मोबिलिटीलाई बढाउँछ । आधारभूत सेवा उपलब्ध भएपछि त्यहाँ बस्न मानिस आकर्षित हुन्छ । त्यसपछि उसले थप सेवाको लागि माग गर्छ । यसले गतिशिलता पनि वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ ।
स्मार्ट सिटी हुनको लागि पानी र बिजुली, गतिशिल सहरीकरण, ग्रीन बिल्डिङ, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिलगायतका विषय आवश्यक हुन्छ । हामीले टुक्राटुक्राको रुपमा हेरिरहेका विषयलाई एकिकृत गर्ने काममा स्मार्ट सिटी सहयोगी हुन्छ । सबैलाई एकिकृत गर्ने बित्तिकै त्यसले आर्थिक गतिविधीलाई नै वृद्धि गर्ने भयो । यसको साथै एउटा सेवाले अर्को सेवा वा सुविधालाई माग गर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यले सुरक्षाको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने भयो र त्यो एकिकृत हुने भयो । पानी र सरसफाइले फाहोरमैला व्यवस्थापनलाई बढावा दिने भयो । उद्योग र प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा औद्योगिक क्षेत्रको माग हुने भयो । मानिसको आयस्तर बढ्दै गएपछि मनोरञ्जन गर्ने वा होटल रेष्टुराँको आवश्यकता पर्ने भयो । यसकारण एउटा क्षेत्रले अर्कोलाई समेट्दै र अझ अभिवृद्धि गर्दै लैजाने हुन्छ । यसले स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । अर्कोतर्फ स्मार्ट सिटीमा बस्ने मानिसले एउटा तहको सेवा सुविधा प्रयोग गरेपछि अझ उच्चस्तरको सेवाको चाहाना हुन्छ । पहिले बिजुलीबत्ती बाल्नेमा मात्र केन्द्रित हुन्थ्यो भने अब स्मार्ट मिटरिङ चाहना राख्ने वा त्यस्तो सेवा खोज्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै स्मार्ट एप्लायन्सहरुको माग हुन सक्छ ।
हामीले अहिले सिंगापुरको स्मार्ट सिटीलाई नमुनाको रुपमा हेरिरहेका छौं । त्यहाँ पनि पहिले आधारभूत सेवा सुविधा दिनेबाटै शुरु भएको हो । त्यसपछि त्यसमा अभिवृद्धि हुँदै अहिले उच्चस्तरीय सेवा दिने अवस्थामा र त्यही अनुरुप स्मार्ट सिटी पनि विकास हुँदै गएको छ । अहिले मानिसको खुसी कति छ वा स्मार्ट सहरमा बस्ने मानिस कति खुसी रहन्छन् भन्ने सम्मको अवस्थामा पुगिसकेको छ । कुन क्षेत्रको मानिस खुसी छ, केको कारणले खुसी वा दुःखी छ भन्नेसम्मको अध्ययन हुने गरेको छ । के कस्ता सेवामा सन्तुष्ट र के मा असन्तुष्ट छ भनेर पनि हेर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा त यस्ता विषयहरुको अध्ययन गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगको वृद्धि हुँदै गएको छ । मानिससँग नभेटी वा सेवा प्रदायकसँग आमनेसामने नभइकन पनि सेवा प्राप्त गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको छ ।
स्मार्ट सिटीमा बस्ने मानिस धेरै खुसी हुन्छन् भन्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ । अन्तिममा राज्यले चाहेको पनि आफ्नो नागरिक खुसी होउन् भन्ने नै हो । स्वचालित प्रणाली, खुला, न्यून खर्च, न्यून ट्राफिक, सरसफाइ गर्ने प्रणाली राम्रो छ भनेपछि मानिस खुसी हुने भयो । खुसी भएपछि मानिसको उत्पादकत्वमा वृद्धि हन्छ । उत्पादकत्व वृद्धि भए पछि त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै योगदान पुर्याउँछ । अहिले ग्रीड (GRID) फ्रेमवर्कमा बसेर स्मार्ट सिटीलाई विकास गर्नेतर्फ सोचिएको छ । स्मार्ट सिटीको विकास ग्रीन, रेजिलियन्ट, र इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहाना हो । यसको अर्थ स्मार्ट सिटी हरित क्षेत्र भएको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सक्ने, सबैलाई समेट्ने र विकासको रुपमा लिइएको छ । (चेम्बर स्मारिकाबाट साभार)